Shiinaha Wall light ML1021 warshad iyo soosaarayaal | Eurborn
Iftiiminta yar-yar ee soo bandhigaysa birta ahama ee lagu qiimeeyo IP65 taasoo alaabtan ka dhigaysa mid ku habboon labada cod ee gudaha iyo dibaddaba. Badeecaddu waa mid jahaysan oo markaa ku habboon in lagu iftiimiyo astaamaha diiradda derbiga ama qaanadaha wax lagu muujiyo. Muraayadaha la shubay Waxay ku darsameysaa isku-dhafan CREE USA LED chip cad oo ku shaqeeya 1W ama 2W. Tamar hoose, ma laha xal dayactir。 Waxaa jira seddex nooc oo nalalka darbiga ah. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay qofka haysta laambadda. Siraha laambadana gacanta ayaa loo rogi karaa si loo gaaro jihada iftiinka la doonayo. Hoteello badan ayaa u doortay tan quruxda badan qurxinta iyo iftiiminta. ML1021 wuxuu ka samaysan yahay hal laambad 1W iyo saldhig, sidoo kale taxane qoys oo ka kooban ML1021, PL021, PL023, iyo PL026. Waxa kale oo aad ku arki kartaa muuqaalka yar ilaa weyn bogga hore ee degelkeena oo si xeel dheer u fahmaya. Waxay ku siineysaa xulashada xagalka qorraxda 20/60 iyo midabada Iftiinka: CW, WW, NW, Red, Green, Blue, Amber.
Midabka Iftiinka CW, WW, NW, Casaan, Cagaar, Buluug, Amber
Awood 1W / 2W
Cabbir N / A
Miisaanka N / A
Qiimeynta IP IP65
Heerkulka heerkulka -20 ° C + 45 ° C
Codsiyada Gudaha / Dibadda / Muuqaalka Muuqaalka
ML102 NALKA WALLA
Qaabka Lambar Brand Brand Midab Dogob PowerMode Gelinta Fiilooyinka Xarkaha Awood Dheecaan iftiin leh Cabbir Qiyaasta
ML1021 CREE CW, WW, NW, Casaan Casaan, Buluug, Amber S20 / F60 Joogto ah 350mA Taxanaha 1W 1.1M 2X24AWG Cable 100LM D45X53 N / A
ML1022 CREE CW, WW, NW, Casaan Casaan, Buluug, Amber S20 / F60 Joogto ah 350mA Taxanaha 2W 1.1M 2X24AWG Cable 200LM 35X75X56 N / A
ML1022-30 CREE CW, WW, NW, Casaan Casaan, Buluug, Amber S20 / F60 Joogto ah 350mA Taxanaha 2W 1.1M 2X24AWG Cable 200LM 43X75X56 N / A
Hore: Iftiinka isha FL411
Xiga: Darbiga iftiinka EU1808
Nalalka Bannaanka ee Dibadda
Laydhka Bannaanka ee Dibadda
Bannaanka Bannaanka Sconce Laydhka
Laydhka khadka EU2009
Laydhka gidaarka ML105
Darbiga iftiinka EU1820